DCU | Dhammaduta Chekinda University in Myanmar
ဓမ္မဒူတ ဆေကိန္ဒ တက္ကသိုလ်
စာရေးစာချ တရားဟောတရားပြ ဓမ္မဒူတ
စာရေး၊ စာချ၊ တရားဟော၊ တရားပြ - ဓမ္မဒူတ
ဘာကြောင့် ဤတက္ကသိုလ်ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ
ရန်ကုန်မြို့ ၌တည်ရှိကာ ကျယ်ဝန်းအေးချမ်း တိတ်ဆိတ်သော ပရဝုဏ်ရှိခြင်း၊ ဝိနည်းတော်နှင့်အညီ နေထိုင် ကျင့်သုံးနိုင်ခြင်း၊ သင်ယူမှုခေတ်မီ၍ ကျင့်သုံးမှု ထေရဝါဒဓမ္မနှင့် ကိုက်ညီခြင်း၊ ပညာသင်ဆုများ ရယူနိုင်ခြင်းတို့သည် ဤတက္ကသိုလ်၏ အားသာချက်များ ဖြစ်ပါသည်။
(၂၀၂၂-၂၀၂၃) ပညာသင်နှစ် ပါရဂူတန်း နှင့် မဟာဝိဇ္ဇာတန်းများအတွက် ကျောင်းသားသစ် ရဟန်းတော်များခေါ်ယူခြင်း
Apr 28, 2022 | အထွေထွေ
ပါရဂူတန်း နှင့် မဟာဝိဇ္ဇာတန်းများအတွက်
ဓမ္မဒူတ ဆေကိန္ဒ တ…
Special Lecture on Elements of Comparative Philology & Translation Studies
Apr 4, 2019 | အထွေထွေ
Special Lecture on Elements of Comparative Philology & Translation Studies given by U Zaw Min Oo in D.C.U. Special Lecture will be on every Tuesday & Friday, totally5Hours inaweek.
Discussion & meeting on all general affairs for Third Trimester & calling for newcomer students
Discussion & meeting on all general affairs for Third Trimester & calling for newcomer students by the academic board of D.C.U. today. There will be advertisement on calling for M.A & Ph.D. newcomer candidates for 2019-2020 Academic Year …
Download M.A. & Ph.D. Application Form